၂၀၂၁ရပ်ရွာစာရင်းစစ်တမ်း - Meta
Submit, discuss and revise proposals: 16 နိုဝင်ဘာ – 30 နိုဝင်ဘာ 2020
Community Tech reviews and organizes proposals: 23 နိုဝင်ဘာ –7ဒီဇင်ဘာ 2020
Vote on proposals: 8 ဒီဇင်ဘာ – 21 ဒီဇင်ဘာ 2020
Results posted: 23 ဒီဇင်ဘာ 2020
ရပ်ရွာဆန္ဒရှိသူများ စစ်တမ်းအတွက် ပုံစံအသစ်
၂၀၂၁ ရပ်ရွာဆန္ဒရှိသူများစစ်တမ်းစရင်းကို အသစ်မျှဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြောက်ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် စစ်တမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်းဖြစ်စဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင်တစ်ခုထူးချွန်အလုပ်: အဆိုပါအဖွဲ့သည် ယခုတစ်နှစ်လျှင် တစ်ခုထူးချွန်အလုပ်ရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကျော အလုပ်သစ်အတွက် မဲပေးကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သူတို့၏ ဆန္ဒအသစ်များကို တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းသောသူများအား ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မဲပေးပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ကျော အသစ်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယခင်ပုံစံ အဟောင်းမှပြောင်းလဲမှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်နှစ်လျှင်များစွာသောအလုပ်များအတွက် အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အရေးအကြီးဆုံးဆန္ဒများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် နှစ်စဉ်ဆန္ဒဟောင်းများကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်သည်။
၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဆန္ဒများ၏အခြေအနေ: ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်မလုပ်သေးသည့်တိုင် မဖြေရှင်းရသေးသည့် ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ စရင်းစစ်တမ်းများမှ ဆန္ဒ ၃ ခုကျန်ရှိသည်။ သူတို့ကမဲများစွာရရှိခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၂၁ နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ စေတနာရှင်တွင် ပါ၀င်မည့်ဆန္ဒ ၂ ခုရှိသည်: ကွဲပြားမှုအတွက်ပုဒ်မအမည်နှင့် VEအတွက်ကိုးကားအမည်ရှိ။ ၂၀၂၀ စေတနာရှင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော သို့မဟုတ်လုပ် ဆောင်ပြီးသောဆန္ဒ ၄ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ကိုင်သေးသော ၂၀၂၀ ဆန္ဒပြ စာရင်းမှ ဆန္ဒ ၁ ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ၂၀၂၁ နောက်ကျမှုတွင်လည်းပါဝင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏: ဝီကီပီးဒီးယားကိုကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည် ၂၀၁၉စေတနာရှင်များ၏အခြေနေအစီရင်ခံစာကိုပြန်လည်သုံးသိပ်ရမည်။
ထိပ်ဆုံး ၁၀ သုတေသနနှင့်ပုံမှန်မွမ်းမံမှုများ": ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ် (ဥပမာ "ထိပ်ဆုံး ၅" သို့မဟုတ် "ထိပ်ဆုံး ၁၀")ကိုကြိုတင်မဆုံးဖြတ်တော့ပါ။ ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဖွဲ့သည် များသောအားဖြင့်စီမံကိန်း တစ်ခု မစတင်မီ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုတေသနပြုလေ့ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် စီမံကိန်းသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး စီမံကိန်းမည်မျှကြာမည်ကို နားမလည်နိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကိုခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လက်ရှိဆန္ဒစာရင်းပြုစုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသို့မလုပ်ပါ။ မကြာခဏနှောင့်နှေးခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ပ်တို့ဒီဟာကိုပြုပြင်ချင်သည်။
စနစ်အသစ်နှင့် အတူကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့နှင့်မကျူးလွန်မီ စီမံကိန်းများကိုသုတေသနပြုမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန္ဒများကိုအပေါ်မှ အောက်သို့ လူကြိုက်များခြင်း အဆင့်ဖြင့်အကဲဖြတ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသနအဆင့်တွင် အောက်ပါစံနှုန်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည် လူကြိုက်များမှု (ဆိုလိုသည်မှာ ဆန္ဒမဲအရေအတွက်)၊ စီမံကိန်း၏ အရွယ်အစားနှင့် အတိုင်းအတာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့်၊ အန္တရာယ်မှီခိုမှုသည် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပဋိပက္ခများဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းစစ်ခြင်း ပြီးဆုံးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နှစ်လျှင်စီမံကိန်းများစွာကို လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘာတွေမလုပ်နိုင်သလဲ (နှင့်အဘယ်ကြောင့်) ကိုပိုမိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းပြမြေပုံနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်နှစ်အတွင်းနောက်ဆုံး သတင်းများကို မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကဏ္ဍများအတွက်သီးခြားခေါင်းဆောင်ဘုတ်များ: မဲအရေအတွက်ကို စီစစ်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုပြုချက်အားလုံးကို ဖော်ပြသည့် ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံကို အဓိကခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထားရှိမည်။ ထို့အပြင် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်စီ အတွက် သီးခြား ခေါင်းဆောင်ဘုတ်ပြားများ ရှိလာလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် (အဓိကခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့မှ) ကြီးမားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် (သီးခြားခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့များ)မှ ကိုယ်စားပြုမှု နည်းပါးသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ရေပန်းစားသော အဆိုပြုချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အဆိုပြုလွှာများ အလုပ်လုပ်သည်ကို ရွေးချယ်ရန် အထက်ပါဖော်ပြထားသည့် စံနှုန်းများကိုအသုံးပြုမည်။
ဘာကြောင့်ဒီအပြောင်းအလဲများ?: စေတနာရှင် ဖြစ်စဉ်သည် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ဆန္ဒများသည် ပိုမိုကြီးမားလာပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်စေလိုသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် (၂၀၂၀ ဆန္ဒပြ စာရင်းတွင် ကဲ့သို့) သေးငယ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ဆန္ဒများနှင့် Wikimediansအားလုံး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆန္ဒများ (ယခင်ဆန္ဒစာရင်းများ၌ ကဲ့သို့) ကို ဆက်လက်၍ ဖော်ပြလိုသည်။ ဒါဟာကျွန်ပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာနဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းတွေ အများကြီးဖြစ်လာတယ်။ ဒီအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများမှစ၍ ကျွန်ပ်တို့ကဤအပြောင်းအလဲများနှင့် အတူတက်လာခဲ့၏၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအပြောင်းအလဲများသည် စေတနာရှင်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ စရင်းစစ်တမ်းကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုလွှာများကိုဖတ်ရှုပေးဖို့မျှော်လင့်ပါသည်။
စရင်းစစ်တမ်းကို ပိတ်ပြီးသည်နှင့် ရပ်ရွာနည်းပညာအဖွဲ့သည် စရင်းစစ်တမ်းမှ အဆိုပြုချက်အချို့ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အဆိုပြုလွှာများကို အောက်ပါစံနှုန်းများအရ ရွေးချယ်မည် လူကြိုက်များမှု (ဆိုလိုသည်မှာဆန္ဒမဲအရေအတွက်)၊ စီမံကိန်းအရွယ်အစားနှင့် အကျယ်အဝန်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့်၊ အန္တရာယ်မှီခိုမှုသည်အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနိင်သော
ဆန္ဒအချို့ကိုစေတနာ့ ဝန်ထမ်းတီထွင်သူများ သို့မဟုတ် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် အချို့သော အဆိုပြုချက်ကို ငြင်းဆန်နေရသလဲ?(ဘာသာပြန်ပါ)
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Community_Wishlist_Survey_2021/my&oldid=22523198"